October 30, 2020 Xuseen 0
Xildhibaanada Puntland ayaa berry subax markale isugu soo laaban doona kal-fadhigooda 47aad oo uu dhowaan furay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, kadib fasax 3 cisho ah oo ay soo qaateen maalmihii ugu dambeeyey.
Barlamaanka Puntland oo ka soo laabanaya fasixii dhalashada Nebiga NNKH ayaa waxa ay sii guda geli doonaan ajandayaasha kal-fadhigooda inkastoo uu maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayey mooshin ka dhan ah guddoomiye ku-xigeenada barlamaanka.
Madaxtooyada Puntland ayaa dedaal dheeri ah ku bixisay mudadii fasaxa lagu maqnaa sidii ay ku baajin lahayd mooshinkaani oo ku soo beegmay xilli aad xasaasi ah isla markaana barlamaanka ay horyaalaan ajandayaal xasaasi ah.
Xog hoose oo ay heshay Puntlandtimes ayaa sheegaysa in mooshinkaan ay ka dambeeyaan xildhibaano ka soo kala jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Bari oo ka damacsan qorshayaal dhowr ah oo ay kamid yihiin.
1-Xildhibaano ka soo jeeda gobolka Sool oo doonaya inay xilka ka qaadaan guddoomiye ku-xigeenka 2aad Ismaaciil Maxamed Warsame ayna booska u dhiiban xildhibaan u janjeera dhankooda.
2-Mudanayaal ka soo jeeda gobolka Sanaag oo weli ka caraysan xilka qaadistii guddoomiye Dhooba-daareed, isla markaana doonaya inay meesha ka saaraan guddoomiye Abukaate Cabdicasiis oo mooshinkii Dhoobo Qabtay.
3-Iyo ugu dambayn xildhibaano ka soo jeeda beelaha degan gobolada Bari iyo Gardafuu oo doonaya inay bedelaan guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee barlamaanka.